विदेशको जागिर छाडेर गाउँमा रमाउँदै अधिकारी - कृषि पत्रिका
शुरुमा करिब रु. १५ लाखबाट व्यवसाय थालेका अधिकारीले अहिले करिब रु ७० लाख लगानी भइसकेको बताए । हाल उनका खोरमा ११७ वटा बाख्रा छन् । मिर्लुङ्ग बहुउद्देश्यीय कृषिफार्म प्रालि दर्ता गरी किसान अधिकारीले भैँसीपालन तथा तरकारी खेतीसमेत गर्ने योजना बनाएका छन् । बोर जातको उन्नत बोकाबाट स्थानीय जातको बाख्रामा क्रस गराएर ब्याडका रूपमा बोका उत्पादन गरी बिक्री गर्दै आएको उनी बताउछन् ।
पाठो पाएपछि कम्तीमा तीन महिनापछि प्रतिकिलो रु. ८०० मा बिक्री गर्ने गरेको उनले बताए । ब्याड बोकाको माग राम्रो रहेकाले पु¥याउन धौधौ हुने गरेको छ । उनले भने, “बोर जातको बाख्रा मासुका लागि छिटो बढ्ने हुँदा यसतर्फ किसानको आर्कषण बढ्दै गएको पाइन्छ ।”
स्थानीय जातको बाख्राको तुलनामा बोर जातको बाख्राको मासु दोब्बरले उत्पादन वृद्धि हुने हुँदा किसानले छोटो अवधिमा राम्रो मूल्य पाउन सक्नेछन् । शुरुशुरुमा प्रतिकिलो रु. एक हजार १०० सम्म बिक्री गर्ने गरिए पनि अहिले रु आठ/नौ सयमा बिक्री गर्दै आएको किसान अधिकारी बताउछन् । तीन महिनाको पाठापाठी १५ किलोभन्दा माथिका हुन्छन् । दूध छुटेपछि पनि करिब २० दिन पालेपछि बिक्री गर्न लायकका हुन्छन् ।
नेपालमा भन्दा बहराइनमा धेरै गुणा राम्रो आम्दानी रहे पनि स्वदेशमा बसेर स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्ने चाहना भएकाले आफूले पशुपालन तथा कृषि पेशा अँगालेको उनले बताए । आफ्नो र भाडामा गरी १२२ रोपनी क्षेत्रफलमा फार्म स्थापना गरिएको र करिब ३० रोपनी क्षेत्रफलमा विभिन्न जातका घाँस लगाइएको किसान अधिकारी बताउछन् । फार्ममा अधिकारी परिवारसहित अन्य तीन कामदारले काम गर्दै आएका छन् । रासस